Allgedo.com » Talo ku socota Ra’isal Wasaare Khayre
Print here| By: allgedo.com: Tuesday, March 7, 2017 // u Jawaab
KHAYRE U GEEYA:DAD, DAWLAD IYO DAL DHIS
Cudur(Siyaasad qabiilaysan) VS Dawo (Siyaasad qabiilaysan)
Waxaa inaga burburay dad, dawlad, dal iyo hanti. Inaynu abuurno hanti iyo dhaqaale, waxaan u baahanahay dal nabad ah oo aan dhamaanteen aaminsanahay inaan wada leenahay waajib na ay tahay inaan wada ilaal sano. Sidoo kale inaynu dal dhisno, waxaan u baahanahay, dawlad leh sharci adag iyo kala dambayn; sinaan iyo cadaalad; hogaan daacad ah; qorshe iyo siyaasad horumarineed iyo waxqabad dhab ah. Hadaba dawlad dhisidu waxay u baahantahay dad fayow, midaysan (Soomaalinimo), wax wada leh (dal qura), isku dan ah(qaranimo iyo dawladnimo), isla markaana isku talo ah (dawlad wadaag). Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa oodo dhacameed say u kala sareeyaan baa loo kala qaadaa. Inta aynaan gaarin hanti iyo dhaqaale abuur, dal iyo dawlad dhisid, waxaa dawlada cusub laga
rabaa in dad ka Soomaaliyeed ee maskax burburku ku dhacay isla markaana dayaysan, ay u samayso qorshe ay ku gaarsiin lahayd inay isla fahmaan in xalka kaliya ee aan ugu bixi karno dhaibaatadii na soo gaartay 26 sano ee la soo dhaafay uu yahay raadinta midnimo, Soomaalinimo, qaranimo iyo dawladnimo.
Burburkii 26 kii sano ee la soo dhaafay, wuxuu saamayn wayn ku yeeshay dhamaan ardada iyo dhalin yarada Soomaaliyeed, kuwaas oo ku kala qobqobnaa gobolo, degmooyin iyo tuulooyin, isla markaana aan marnaba fursad u helin inay arkaan qaranimo, midnimo iyo dawladnimo Soomaaliyeed. Hadaba waxaa muhiim ah in dawlada cusubi ay si deg deg ah u samayso gudi quburaa oo isgu jira culumaa’udiin, aqoon yahano, qoraa iyo suugaan yahano, si loo sameeyo manhaj waxbasho ay dhamaan dugsiyada, iskuulada iyo jaamacaduhu ku midaydan yihiin si ardada iyo dhalin yarada loo baro: Dhaqanka, taariikhda iyo suugaanta Soomaaliyeed Faa’iidada midnimada, qaranimada iyo dawladnimada  Dhibaatada qabyaalada iyo musuqmaasuqa Dhulka Soomaaliyeed, dhamaan xuduudihiisa iyo khayraadkiisa.
Waxaa sidoo kale muhiim ah in dawlada cusub ay la timaado qorshe iyo siyaasad ku wajahan baraarujinta iyo wacyi galinta dad waynaha iyadoo adeegsanaysa dhamaan qalabka warfaafinta sida raadyaha, taleefishanka, wargaysyada iyo internet ka. Waa in la helo qoraalo tayo leh, heeso, ruwaayado, gabayo , waci diimeed , iyo eray bixin cusub oo ka turjumaya isbadalka iyo midnimada shacabka, wax qabadka dawlada iyo dhaliilaheeda, qorshayaasha horumarineed, iyo la dagaalanka qabyaalada iyo musuqmaasuqa. Waa in dawladu si toos ah ula socodsiiso shacab ka wax qabadkeeda uuna yahay mid muuqda oo la arki karo.
Shaqaalaha dawladu waa inay noqdaan kuwo lagu soo xulay aqoontooda, waayo aragnimadooda iyo kartidooda si cadaalad ah oo muuqata. Tani waxay keenaysaa in la helo shaqaale fahamsan xaquuqdiisa iyo waajibaad ka saaran labadaba, isla markaana diyaar u ah ilaalinta sharciga iyo kala dambaynta, lehna kalsooni buuxda iyo waxqabad. Shaqaale tayo leh oo wadaniyiin is la abuuro waxay u baahan tahay in la helo: Hogaan fiican iyo ku dayasho Cadaalad iyo sinaan Haykal dawladnimo iyo luuqad isku mid ah Nidaam qoran iyo sharuuc la raaco oo loo wada siman yahay Tababaro tayo leh iyo abaalmarin.
Dhawrkii dawlad (ku sheeg) ee na soo maray burburkii kadib, waxaan ugu baranay in madaxda, wasiirada iyo xubnaha golaha shacabka loo diro goboladii iyo qabiiladii ay ka
yimaadeen taasoo muujinaysa inay matalaan qabiilo iyo gobolo gaar ah oo aysan ahayn shaqaale qaran.Runtii taasi waa muuqaal aad u fool xun oo ku tusaysa inaysan jirin dawladnimo iyo haykal dawladnimo midna. Hadaba talo ahaan, si loo helo ummad talo iyo dawlad wadaag ah, waa in dawlada cusubi si deg deg ah uga samaysato xafiisyo dhamaan gobolada dalka , si dhamaan madaxda dalka, wasiirada, gudiyada labada gole ee shacabka ay ugu yaraan bishiiba hal asbuuc u goojaan gobol gobolada Soomaaliyeed ka mid ah halkaas na ay ku soo gutaan shaqadooda qaran. Waxaa halkaa ka dhalanaya in masuuliyiinta iyo madaxda dalku ay soo bartaan dad ka iyo dalka ay matalaan oo ka kooban dhamaan wadan ka Soomaaliyeed. Waxay sidoo kale shacabku fursad u helayaa inay bartaan madaxdooda, shaqada ay u hayaan qaran ka iyo waxqabad kooda. Waxaa kale oo yana muhiim ah in xafladaha, shirarka qaran, munaasabadaha maalmaha taariikhigaa ee ay madaxda sare ka qayb galaan in marba gobol iyo degmo lagu qabto si dawladnimadu u baahdo loona wadaago.
Waxqabad ka afarta sano ee soo socda laga sugayo dawlada waa inay dhisto: Dad iyo dal midaysan isla markaana aaminsan, ku kalsoon una hogaansan sharciga dalka Ummad leh qab, sharaf, midnimo, wadaniyad iyo kala dambayn Soomaalinimo, Soomaalinimo, Soomaalinimo Ummad aaminsan isku tashi iyo isku filnaasho.